प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका दाहाललाई संसद बैठकमै कसले गर्यो फोन? | Nagarik News - Nepal Republic Media
प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका दाहाललाई संसद बैठकमै कसले गर्यो फोन?
सुनिल थापाकाे माेबाइलमा कुरा गर्दै दाहाल।
काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई कसैले फोन गरेर बधाइ दिएको छ। राप्रपा नेता सुनिल थापाको मोवाइलमा आएको फोन थापाले दाहाललाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री चयनको मतदान चलिरहेका बेला दाहाल बधाइ लिँदै थिए। दाहालसँगै रहेका राप्रपा नेता थापाले आफ्नो मोबाइलमा आएको फोन दाहाललाई दिएका थिए। थापाको मोबाइलमा आएको फोनमा दाहालले केहीसमय प्रशन्न मुद्रामा कुराकानी गरेका थिए। फोन सम्बाद सकिएपछि दाहाल र थापाले केही समय भलाकुसारीसमेत गरेका थिए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ १५:१७ बुधबार
प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका दाहाललाई संसद बैठकमै कसले गर्यो फोन